हो म बेश्या हु, आउ न मलाइ मूल्य तोक,::देश र जनताप्रति समर्पित
हो म बेश्या हु।।
हो म बेश्या हु,
आउ न मलाइ लुछा।।
हो म बेश्या हु!!
म आफै लाई किन यस्तो भन्दै छु?
म आफैलाइ किन चिनारी गराउदै छु??
म भित्र नि प्रश्न आकै थिए।।
म भित्र नि ज्वाला जलेकै थिए।।।
मात्र थिएनन् जवाफ को हिसाब।
मात्र थिएनन् हुलाक को किताब।
उह माथी बसेका लाई सोध्थे।
आखिर मलाइ जन्म देकै किन??
आखिर मलाइ बेश्या बनाकै किन??
म आफ्नो सिकारी आफै खोज्दैछु।
गिद्दे हरु को प्यास मेट्दै छु।।
नजाउ मेरो निदोर्ष बचेरा मर्ने छन।
जुन प्रेम बीउ रोपि कोइ बिलिन भएका थिए।।।
मेरो बाजि लगाउ।।
हो पक्कै मलाइ छुदा पाप लाग्छ भन्ने हरु
बिहान मन्दिर मा पुजारी हुन्छ्न।।
घर कि छोरी चेली हुन्छे।।
खैर म बेश्या हु,।।।
ए हजुर म बेश्या हु।
आउ न आउ कोइ लुटा मलाइ।
से*क्स त बिहे अघिनै गर्नुपर्छ : ज्योति मगर (भिडियो सहित)
मिठो स्वरकी धनी भएपनि ज्योतीको आवरण र कपडा लगाउने शैलीलाई बढि प्राथामिकता दिइन्छ । त्यसो त ज्योतीलाई धेरैले ‘हट एण्ड से*क्सी’ को ट्याग दिने गर्छन् । नेपाली फिल्म उद्योगमा ज्योतीलाई को ‘हट एण्ड सेक्*सी’ लाग्छ त ?
उनले आफूलाई नायिका माला लिम्बु र नायक सबिन श्रेष्ठ ‘हट एण्ड से*क्सी’ लाग्ने बताइन् । पछिल्लो पटक एउटा अनलाइन च्यानलमा अन्तर्वार्ता दिदै ज्योतिले मलेसियामा घटेको केहि बर्ष अघिको घट्नालाई कोट्याउँदै आफ्ना भनाइ राखेकी छन् । पत्रकारले सोधेको प्रश्नको उत्तर उनले खुलेरै दिएकी छन् ।
उनले पत्रकारसंग कुरा गर्दै से*क्स बिहे पछि मात्र होइन बिहे अघि गर्नु पनि राम्रो हो म त्यसलाई राम्रो मान्छु भन्दै खुलस्त पारेकी छन् ।
उनले नेपाली महिलाहरु निकै नि पिडित छन्, गर्व बाट बाहिर निस्किने बित्तिकै बलात्कार हुन्छन भन्दै नेपाली महिलाले भोग्नु परेको समस्यालाई निकै खुलेर बिरोध गरेकी छन्
विप्लवले लेखेको अति मार्मिक गित … बिद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र बिक्रम चन्द विप्लव राजनीतिमा जति चर्चामा छन जनवादी गित संगीतमा पनि उत्तिकै लोकप्रियता बटुलेका नेता हुन । उनले लेखेका...